136s Ny olo-malaza tsy tian&#39;i Andrew Cuomo manoloana ny valanaretina coronavirus images and subtitles
- Nipoitra ny governemantan'i New York Andrew Cuomo amin'ny maha-mpanao politika avo lenta azy tao anatin'ny fipoahan'ny coronavirus. -Mbola manana ny làlam-piakarana hiakatra isika. -Ny fihanaky haingana dia haingana tany Etazonia Nanova fiainana andavanandro ho an'ny Amerikana. Eo ambonin'ny toe-javatra sahiran-tsaina sy misafotofoto dia fametrahana hafatra mifangaro politika mifangaro. -Mijery lozam-pifamoivoizana ianao, izay lehibe lavitra noho ny isa marobe resahintsika. Tsy midika izany fa holazainay amin'ny rehetra izany, "Tsy mitondra fiara intsony." -Ny i Cuomo kosa dia nitady hanome fahazavana ao anatin'ny lahatahiry isan'andro. New York dia nanamafy tranga maro momba ny coronavirus noho ny fanjakana hafa. Ny fanavaozana nataon'i Cuomo dia mazava be ny filàn'ny fanjakany. -Ventilator, ventilator, mpanararaotra. Mila 30 000 isika. -Raha manandrana ny tenany manokana ny governora hampitony ny tahotra matahotra. -Tsy hitako ny fomba fihetsik'i New York. Tsapako ny fomba ifandraisan'ny New Yorkers. Hitako ireo mpiasa an-tsitrapo momba ny fahasalamana 6.000. Hitako fa tafakatra 40.000 ireo mpiasan'ny fahasalamana. Hitako ireo mpivarotra miantso ahy hoe: "Afaka manampy aho". Izany no New York. Izany no New York. - Vokatr'izany dia lasa fifampidinihana ny fanendrena ho an'ny New Yorkers sy mihoatra. Cuomo koa dia tena narotsaka loatra miaraka amin'ny eritreriny momba ny fitantanan'i Trump. Tamin'ny fiandohan'ny krizy, nanomboka i Cuomo sy i Trump miaraka amin'ny fametrahana ny tsy fitoviana. - Nefa nifanaraka omaly ny filoham-pirenena, jereo, miady ny ady mitovy ihany isika, ary ity ny ady. -Nefa rehefa niharatsy ny toe-javatra, dia ny lamosiny sy ny resany lasa mafana kokoa. -Makemake tsoritra eo amin'ny lamosinao handefasana ventilatera 400? Inona no hataonay amin'ireo mpanamory venty 400 rehefa mila 30 000 ventilator. - Nefa, fantatrao, raha mihevitra ny governora Cuomo ianao, hopitaly efatra izahay no manangana azy. Ivom-pitsaboana efatra izahay. Tena miasa mafy izahay, ho an'ny mponin'i New York. Miara-miasa aminy isika, ary avy eo dia nijery azy aho tamin'ny fampisehoana mitaraina. -Raha tsy misy raha toa ka tafakatra i Trump mandritra ny fanontanian'i Cuomo na tsia. ireto fanavaozana isan'andro ataon'ny governora ireto dia lasa tsatokazo ho an'ny New Yorkers mitady tari-dalana sy fiononana. -Mety hataoko izany satria tiako i New York, ary tiako i New York satria tian'i New York ianao.
Ny olo-malaza tsy tian&#39;i Andrew Cuomo manoloana ny valanaretina coronavirus
< start="0.12" dur="1.92"> - Nipoitra ny governemantan'i New York Andrew Cuomo >
< start="2.04" dur="2.2"> amin'ny maha-mpanao politika avo lenta azy >
< start="4.24" dur="1.79"> tao anatin'ny fipoahan'ny coronavirus. >
< start="6.03" dur="2.4"> -Mbola manana ny làlam-piakarana hiakatra isika. >
< start="8.43" dur="2.14"> -Ny fihanaky haingana dia haingana tany Etazonia >
< start="10.57" dur="2.07"> Nanova fiainana andavanandro ho an'ny Amerikana. >
< start="12.64" dur="3.03"> Eo ambonin'ny toe-javatra sahiran-tsaina sy misafotofoto >
< start="15.67" dur="2.43"> dia fametrahana hafatra mifangaro politika mifangaro. >
< start="18.1" dur="2.7"> -Mijery lozam-pifamoivoizana ianao, >
< start="20.8" dur="2.97"> izay lehibe lavitra noho ny isa marobe resahintsika. >
< start="23.77" dur="2.26"> Tsy midika izany fa holazainay amin'ny rehetra izany, >
< start="26.03" dur="1.35"> "Tsy mitondra fiara intsony." >
< start="27.38" dur="2.14"> -Ny i Cuomo kosa dia nitady hanome fahazavana >
< start="29.52" dur="1.31"> ao anatin'ny lahatahiry isan'andro. >
< start="30.83" dur="2.58"> New York dia nanamafy tranga maro momba ny coronavirus >
< start="33.41" dur="1.43"> noho ny fanjakana hafa. >
< start="34.84" dur="3.09"> Ny fanavaozana nataon'i Cuomo dia mazava be ny filàn'ny fanjakany. >
< start="37.93" dur="3.59"> -Ventilator, ventilator, mpanararaotra. >
< start="41.52" dur="1.38"> Mila 30 000 isika. >
< start="42.9" dur="1.9"> -Raha manandrana ny tenany manokana ny governora >
< start="44.8" dur="1.35"> hampitony ny tahotra matahotra. >
< start="46.15" dur="3.22"> -Tsy hitako ny fomba fihetsik'i New York. >
< start="49.37" dur="3.37"> Tsapako ny fomba ifandraisan'ny New Yorkers. >
< start="52.74" dur="2.67"> Hitako ireo mpiasa an-tsitrapo momba ny fahasalamana 6.000. >
< start="55.41" dur="4.1"> Hitako fa tafakatra 40.000 ireo mpiasan'ny fahasalamana. >
< start="59.51" dur="3.48"> Hitako ireo mpivarotra miantso ahy hoe: "Afaka manampy aho". >
< start="62.99" dur="2.83"> Izany no New York. Izany no New York. >
< start="65.82" dur="2.45"> - Vokatr'izany dia lasa fifampidinihana ny fanendrena >
< start="68.27" dur="1.48"> ho an'ny New Yorkers sy mihoatra. >
< start="69.75" dur="1.81"> Cuomo koa dia tena narotsaka loatra >
< start="71.56" dur="1.77"> miaraka amin'ny eritreriny momba ny fitantanan'i Trump. >
< start="73.33" dur="2.54"> Tamin'ny fiandohan'ny krizy, nanomboka i Cuomo sy i Trump >
< start="75.87" dur="2.22"> miaraka amin'ny fametrahana ny tsy fitoviana. >
< start="78.09" dur="2.36"> - Nefa nifanaraka omaly ny filoham-pirenena, jereo, >
< start="80.45" dur="3.83"> miady ny ady mitovy ihany isika, ary ity ny ady. >
< start="84.28" dur="2.48"> -Nefa rehefa niharatsy ny toe-javatra, dia ny lamosiny sy ny resany >
< start="86.76" dur="1.57"> lasa mafana kokoa. >
< start="88.33" dur="3.39"> -Makemake tsoritra eo amin'ny lamosinao handefasana ventilatera 400? >
< start="91.72" dur="2.76"> Inona no hataonay amin'ireo mpanamory venty 400 >
< start="94.48" dur="3.03"> rehefa mila 30 000 ventilator. >
< start="97.51" dur="2.64"> - Nefa, fantatrao, raha mihevitra ny governora Cuomo ianao, >
< start="100.15" dur="1.88"> hopitaly efatra izahay no manangana azy. >
< start="102.03" dur="2.09"> Ivom-pitsaboana efatra izahay. >
< start="104.12" dur="3.92"> Tena miasa mafy izahay, ho an'ny mponin'i New York. >
< start="108.04" dur="0.98"> Miara-miasa aminy isika, >
< start="109.02" dur="2.19"> ary avy eo dia nijery azy aho tamin'ny fampisehoana mitaraina. >
< start="111.21" dur="2.92"> -Raha tsy misy raha toa ka tafakatra i Trump mandritra ny fanontanian'i Cuomo na tsia. >
< start="114.13" dur="2.4"> ireto fanavaozana isan'andro ataon'ny governora ireto dia lasa tsatokazo >
< start="116.53" dur="2.72"> ho an'ny New Yorkers mitady tari-dalana sy fiononana. >
< start="119.25" dur="5.17"> -Mety hataoko izany satria tiako i New York, >
< start="124.42" dur="4.58"> ary tiako i New York satria tian'i New York ianao. >